KeltnerPRO EA Review - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
BEST Forex EA'S | Expert mpanolo-tsaina | FX ANY JAPON KeltnerPRO EA 0
Vola tsiroaroa: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD sy NZDUSD
Fotoana natokana: M15 (EURUSD) & M5 (hafa tsiroaroa)
KeltnerPRO EA Review - Best Forex Expert Advisor ho an'ny varotra automatique
KeltnerPRO EA dia mahery Forex Expert Mpanolotsaina ary mahasoa FX Trading Robot noforonin'i Adam Miller, Jared Rybek ary Doug Price (Izay efa lasa ny Apk Trader Ohb EA ary koa miasa ho azy.
Ny lojika ara-barotra dia ny Forex Robot dia mahita ny fitarihana mahomby indrindra amin'ny andro manaraka 2 ary manokatra ny lamina ilaina amin'ny fotoana voafaritra.
Ny karajia dia mifototra amin'ny indices sy matematika. Noho izany dia manome ity rafitra ity 60% ny fandresena po.
Nosedraina ho toy ny rafi-pihariana manara-penitra izy io, ary rehefa nahita ny fahombiazany dia niova ho robot FX.
Izany dia nitarika ny porofo tsy azo hividianana vola izay tsy maintsy zarainay aminareo.
Fanoroana maherin'ny $ 112,000 amin'ny kaonty tena feno vola feno.
KeltnerPRO EA miara miasa EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD ary NZDUSD pairs amin'ny 5 sy 15 minitra ora frame. Azonao atao ny mahita ny fomba tsara indrindra alamina na manatsara azy ireo amin'ny tenanao raha tianao. Ny mpanolotsaina manam-pahaizana dia mora mora. Mahazo fanampiana ianao, ny ekipa dia vonona mandrakariva hanampy anao!
Ny fampiasana io rindrambaiko varotra io dia tsy voakasika amin'ny fihetseham-po, ny toe-javatra ratsy, na koa ny filàna ny filàna ara-batana isan'andro. Miasa fotsiny izy io, miaraka amin'ny 100% fanombanana sy fampiharana ny tsena.
KeltnerPRO EA dia nitombo ny ekipa manam-pahaizana momba ny mpivarotra izay te-hahita anao hahomby!
KeltnerPRO EA - Tsy Fantatra Amin'ny Fanaovam-barotra Forex?
Ampiasao ny KeltnerPRO EA sy hiverina ny fampiasam-bola ho volamena!
KeltnerPRO EA - Tsy efa nandre momba ny roboka ho an'ny varotra taloha ve?
Easy-bola tsy misy ezaka no KeltnerPRO EA izany rehetra izany. Aorian'ny rafitra, ny maodim-panafarana sy ny fetran'ny fifanakalozana nataonao dia nomena anao, ny Robot dia mandray sy mampihatra ireo trosa rehetra ho anao. Izany dia ahafahanao mifehy sy mifantoka amin'ny herinao amin'ny raharaha lehibe hafa.
The KeltnerPRO EA mitazona sy miasa 24 / 5 mitady fividianana tombontsoa azo atao. Noho izany raha tsy manaisotra azy ianao, dia tsy hanadino ny safidin'ny varotra vola tsy misy vidiny.
Tsy tahaka antsika olombelona, ​​ny KeltnerPRO EA dia Mila asehontsika amin'ny korontana ara-pihetsehampo, ary ho afa-miasa ao amin'ny tanteraka calculative tontolo iainana. Ny manam-pahaizana dia tsy mpanolotsaina ho maimaika fotsiny-ny-ny-fotoana fanapahan-kevitra; Raha ny marina no handeha manangona ny zava-misy sy ny tarehimarika, ary tsy hamela ny tahotra, tahotra sy ny adin-tsaina mahazo an-dalana.
KeltnerPRO EA - Momba ny Keltner Channels
Keltner Channels dia fitaovana iray ampiasaina hamantarana ny fihoaram-pefy miaraka amin'ny fandehanana an-tsehatra sy ny fitarihana channel. Ary azo ampiasaina ihany koa ny hamantatra ny ambaratonga ambony sy ny oversold.
Chester Keltner dia ny Ray sy Mpamorona ny Keltner Channels. Naka izay nianarany i Jareda Keltner Channels ary nanao fanakianana tsotra kely teo aminy tamin'ny tetikady iray hafa izay noforoniny teo aloha.
Ity rafitra varotra ity dia tanteraka tanteraka. Tsy mila fahalalana momba ny varotra na inona na inona ianao. Ny fidirana amin'ny varotra, ny fivoahana, ny fitantanana varotra, ary ny loza dia natao ho anao avokoa.
KeltnerPRO EA - Momba ny Trading Logic, fananganana sy fitakiana hafa
KeltnerPRO EA dia tsy nofaritana amin'ny risika tsy ilaina. Tsy misy martingale; Tsy ho very ny akanjonao na ny kaontinao ianao, noho ny tsy fifehezana loko.
Ary tsy misy mihitsy ny varotra. Eny, misy ary mety hampiarahina ny varotra, nefa TSY manafina izany ho an'ny varotra entona. Ny varotra varotra dia mampidi-doza ary matetika dia miteraka fahavoazana ho an'ny fiatoana.
Tsy misy fatiantoka avo intsony eto. Ity EA ity dia mampihena ny fatiantoka azo antoka izay ambany noho ny tombom-barotra. Inona no dikan'ity?
Low mety sy ny valisoa avo. Afaka mandany vola amin'ny varotra vitsivitsy ianao ary mahazo iray ihany, ary mbola mivoaka ny vola.
Eo ho eo ny lasa tsy dia -20 pips varotra sy ny varotra no mpandresy + 40 pips. KeltnerPRO EA dia mandeha ihany koa ny mpivarotra mba hahazoana tombontsoa amin'ny fampiasana teknolojia mampiavaka ny Jared. Tiany ny miantso azy io PPFL for: Tombontsoa mivaingana.
KeltnerPRO EA ny mpivarotra amin'ny EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD ary NZDUSD vola tsiroaroa. Petra-bola kely dia kely dia mety ho avy amin'ny $ 100 for 0.01 lotsize.
Ananako mihoatra matoky KeltnerPRO EA noho ny fampiasam-bola ao amin'ny tsenambola, ny fananana trano, na ny torohevitra avy amin'ireo mpampiasa vola madinika indrindra.
Raha ny marina, araka izay azonao jerena avy amin'ny antoko 3rd voamarina ny porofo sy ny kaonty fanamarinana fa tsy vonona ny hampiasa ny volako amin'ity rafitra ity aho.
KeltnerPRO EA tsy ampy amin'ny tsy mampino vidiny, izany hoe $ 499 ihany. Aza miandry mba haka ny dika mitovy!
Tsidiho ny tranonkala ofisialin'ny KeltnerPRO EA
Hanomboka date: March 5, 2014